Baarlamaanka Kenya Oo U Yeedhay Wasiirkooda Arrimaha Dibadda Oo Muqdisho Ku Soo Waajahneyd – somalilandtoday.com
Baarlamaanka Kenya Oo U Yeedhay Wasiirkooda Arrimaha Dibadda Oo Muqdisho Ku Soo Waajahneyd
(SLT-Nairobi)-Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa saaka qoreysa in dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in xaalada la dejiyo, khilaafka taaganna si hoose lagu dhameeyo, si looga arinsado wixii dhacay todobaadkan.
Wararku waxa ay sidoo kale sheegayaan in Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Munica Juma ay qorsheyneyso iney soo gaadha magaalada Muqdisho, si ay xaalada ugala hadasho madaxda ugu sareysa ee dowladda Soomalaiya.
Munica Juma oo ka soo laabatay shirkii Amaanka ee ka dhacay Dalka Germany, ayaa qorsheheda ahaa iney maanta soo gaadho Muqdisho, balse waxaa arintaas ka hor istaagay baarlamaanka dalka Kenya.
Xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya oo ay Haweeneydan maanta hortageyso, ayaa la filayaa iney warbixin dhameystiran ka siiso xaalada guud ee ku xeeran khilaafka labada dal ee salka ku haya shirka 7-dii bishan ka dhacay magaalada London ee shidaalka Soomaaliya.
Katoo Metito oo ah Gudoomiyaha Guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in Wasiirada ay doonayaan in ay wax ka weydiiyaan khilaafka dibolamaasiyadeed ee sii xumaanaya una dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya, sidoo kalena laga dhageysnayo bal halka ay salka ku heyso xiisada taagan.
Xoghayaha joogatada ah ee Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamau ayaa dhankiisa sheegay inuu daqiiqad kasta Munica Juma siinayay hadba wixii soo kordha, talaabooyinka ay qaadeenna ay ahaayeen kuwo ay la socotay.